We Fight We Win. -- " More than Media ": နေမီးလျှံ သတင်း
နိင်ငံတကာ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာ ဒီရက်ပိုင်းထူးခြားတဲ့သတင်းတပုဒ်ကတော့
မတ်လ ၆ ရက်နေ့မှာ နေလုံးကြီးဆီးက မီးတောက်မီးလျှံကြီးတခု ထတောက်ခဲ့တဲ့သတင်းပါ။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ 
စာဖတ်ပရိတ်သပ်တွေလဲ ဒီအကြောင်းကိုသိသင့်တယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် ဒီသတင်းကိုမျှဝေလိုက်ပါတယ်။ အမေရီကန် နာဆာအဖွဲ့ က စကြာင်္ဝဌာကို အထဲမှာ နေ လုံး ကြီးကို အဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့် လေ့လာနေခဲ့ကြတယ်။ နေရဲ့ မျက်နာပြင်မှာ မီးလျှံတွေရှိနေတယ်။ ၁၁ နှစ် အတွင်းမှာ အပြင်းထန်ဆုံး မီးတောက်မီးလျှံကြီးတခုထတောက်ခဲ့တယ်။ ဒီမီးတောက်မီးလျံကြီးကို အိပ်ခ်ျ ၅ ဒသမ ၄ (X 5.4) လို့နတ်ဆာ သုတေသီတွေက အမည်ပေးထားကြတယ်။
ဒီမီးတောက်ကြီးရဲ့ အရှိန်လှိုင်းက ကမာ`ဘမြေကိုပါ သက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်။ နယူးယောက်မြို့က ဂျီပီအက်စ် တွေ အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာတယ်။ ဆောင်းတွင်း မှာအပူရှိန်မြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။ အကာသမှန်ပြောင်းတွေကတဆင့် မြင်ရတဲ့နေ၀န်းဟာရောင်စုံအသွေးဖြာနေတယ်။ အလွန်လှပတဲ့အသွင်ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုတယ်။ တချို့ နိင်ငံတွေမှာတော့မိုးကုတ်စက်ဝန်းနေထွက်ချိန်မှာအလွန်လှတဲ့အရောင်တွေဖြစ်နေမယ်လို့ 
ဆိုပါတယ်။ ၂၀၁၃ခု နှစ်မှာ အပြင်းထန်ဆုံး မီးတောက်တခု
နေမျက်နာပြင်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နိင်သေးတယ်လုို့ လဲ နတ်ဆာအဖွဲ့ က ခန့် မှန်းထားပါတယ်။
ဆွီဒင်နိင်ငံတောပိုင်းအရပ်မှာ နေမီးလျှံသက်ရောက်မှုကြောင့် လှပတဲ့ ရှု့ ခင်းတခု ကို့ကိုမိုးကုတ်စက်ဝိုင်းမှာမတ်လ ၇ရက်နေက မြင်တွေ့ ရပုံ။
( Northen lights ripple through the skies over Abisko in Swedish Lapland late March 7. )
The sun flame will reach to earth and burn everything until the earth crust.
Thats what Ma Ya people predicted in their Calender.